विदेशमा पढेका ८८% डाक्टर फेल | EduKhabar
काठमाडौं ३२ असार / नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएकाले मेधावी विद्यार्थी पनि डलर तिरेर विदेश जान बाध्य भएको बहस चलिरहेको छ । तर, विदेश कस्ता विद्यार्थी गएका छन् ? मेडिकल पढ्ने योग्यता भएका कि पैसा तिर्ने क्षमता भएका भन्ने प्रश्न झन् गम्भीर छ ।
एमबिबिएस पढेर डाक्टर भएकाहरूलाई बिरामी जाँच्ने लाइसेन्स दिन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले परीक्षा लिन्छ । तर, विदेशमा कस्ता विद्यार्थी गएका छन् र कस्तो शिक्षा लिएर आएका छन् भन्ने प्रस्ट पार्न टेबलमा प्रस्तुत गरिएको उदाहरण नै काफी छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार गत वर्ष १६ मंसिरमा काउन्सिलले लिएको परीक्षामा विदेशमा एमबिबिएस पढेका ५२६ डाक्टर सहभागी भएकोमा ४६३ जना असफल भए ।
त्यस्तै, बिडिएस पढेका ४१ जना सहभागी भएकोमा ३७ जना असफल भए । यसरी एमबिबिएसतर्फ ८८% र बिडिएसतर्फ ९०% डाक्टर काउन्सिलको परीक्षामा असफल भएका छन् ।विदेशमा मेडिकल पढ्न जाने विद्यार्थी दुईथरी हुन्छन् । नेपाल सरकारको अथवा सम्बन्धित देशको छात्रवृत्ति पाएर पनि विद्यार्थी विदेश जान्छन् । तर, यसको संख्या सीमित छ । नेपालमै मेडिकल साइन्स पढ्न पनि प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउनुपर्छ । योग्यताक्रममा पछि परेका तर अभिभावकले पैसा तिर्न सक्ने विद्यार्थीलाई विदेशको विकल्प खुलै रहन्छ । यसरी विदेश जाने धेरैजसो विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिन्छन् ।
एकपटक असफल भए पनि मेडिकल काउन्सिलमा पटकपटक परीक्षा दिन पाइन्छ । कतिपय विद्यार्थीले ३६ पटकसम्म पनि परीक्षा दिएको उदाहरण छन् । जुनसुकै मूल्यमा पनि डाक्टर हुन्छु भनेर सपना देखेका विद्यार्थीको भविष्य त बन्न सक्छ, तर त्यस्ता मेडिकल जनशक्तिबाट आमजनताको स्वास्थ्यमा भने गम्भीर खेलबाड हुन्छ । तर, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि डा. गोविन्द केसीले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि विदेश जाने विद्यार्थीको पनि परीक्षा लिन थालिएको छ ।
परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीले मात्र मेडिकल काउन्सिलको सिफारिसमा शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट पाउँछन् । यसो गर्दा एमबिबिएस पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या आधाभन्दा पनि धेरै घटेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा करिब एक हजार विद्यार्थी मेडिकल पढ्न विदेश जाने गरेकोमा अहिले यो संख्या ४५० मा झरेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाका अनुसार कतिपय डाक्टरले लाइसेन्स लिन ३६ पटकसम्म परीक्षा दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०७५ आषाढ़ ३२ ,सोमबार
Lokendra Ghatal9months ago
The demands of Dr. KC are right. They should be completely implimented.